Allgedo.com » Safaarada Soomaaliya ee Roma ma guri uu Nuur Cade leeyahaybaa, mise waa hanti qaran? (Daawo 2 Video)
Print here| By: allgedo.com: Tuesday, December 4, 2012 // 2 Jawaabood
Maanta qoraalkaaygu waxuu ku wajahan yahay qoraalo iyaamahaan saxaafada calamka iyo tan soomaaliduba isla dhex marayeen oo ku saabsan Safaarada aay Soomaaliya ku leedahay dalka Talyaaniga gaar ahaayna magaalada Roma. Safaarada Soomaaliya aay ku leedahay dalka Talyaaniga waxaay ka mid tahay Hantida dad waaynaha Soomaaliyeed oo dowladiihii dalkeena ka jiray intaan burburku dhicin aay qaranka dalka u iibiyeen.Hadaba burburkii ka dib waxaaa durbadiiba bilaawday bililiqo baahsan , dhac, nin waxuusan lahaayn sheeganaya iyo iibsashada hantida dad waaynaha soomaaliyeed. Qof kasta waxuu rabaa in uu maalin ku taajiro, qof kasta waxuu rabaa in uu tittle (Dr. Professor, Sheikh IWM) been ah oo uusan lahaayn sheegto.
Iyaamahaan waxaa soo baxay warar lagu kalsoon yahay oo sheegaya in Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Talyaaniga Nuur Xassan Hussen (Nuur Cade) uu dhismaha safaarada Soomaaliya ee dalka Talyaaniga shirkad ajaanib ah 18-sano ka kiraaystey. Nuur Cade waxuu safaarada ku kiraaystey lacag dhan.
$10,000 (toban –kun) iyada oo sagaalka danbana bishii lagu heshiiyay in Shirkadu bixiyaan $15,000 ( shan iyo toban –kun). Waxaa kale oo wararku intaa ku darayaan in Nuur Cade iyo Shirkadu heshiis ku galeen in 9-ka sano ee hore ay bixiso shirkadu $1080, 000 (melyaniyo sideetan kun oo doolar) iyada oo 9-ka sano oo danbana bixinaya $1,620,000 (melayan iyo lix boqol iyo labaatan kun oo doolar).
Si arintaa loo xaqiijiyo mid ka mid ah wariyayaasha Roma uga soo warama TV-ga Universal oo lagu magacaabo Moxamed Roberto ayaa waraaysi uu la yeeshay Nuur Cade waxuu wax ka waaydiiyeey
arintaan ku saabsan safaarada in la kiraaystey. Haddaba, jawaabtii uu Nuur Cade bixiyay ka daawo Video-ga hoose:
Nuur Cade wallow uu hadalka si kale u dhigay waxuu waraaysigiisa ku cadaaynayaa in uu safaaradii Soomaaliya ku lahaayd Talyaaniga kiraaystey, kana kiraaystey shirkad ajaanib ah. Mar Su, aal laga waaydiiyeey in Dowladu ka war haayso arintaan waxuu ku jawaabey aniga ayaa meeshaan safiir ka ah. Waxaay taasi kuu cadaaynaysaa in isagu sidoo doono u maamushay safaaradii soomaaliya aayna la wareegtey shirkad ajaanib ah walibana aan ka haaysan Dowlada iyo Baarlamka qaranka midna wax ogolaansho ah.
Safaarada Soomaaliya ee dalka talyaaniga ku taal waxaay waayadaan danbe u ahaayd hooy qaxoonti soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 200-oo qof kuwaas oo dalka talyaanugu u diidey sharci. Nuur Cade 4- sano ayuu safaarada gees kaga shaqaaysanayeey, dhinaciisa waxuu ka dhigtay mutuleel, kursi leader ahna wuu soo dhigtay oo uu isku war wareejiyo sidii Nin boqor ah. Dhinaca kale ee qaxoontiga Soomaalidu kaga sugnaayeen Safaarada waxaa ka muuqdey dayac baahsan oo qof indhihiisa ku arka mooyaane aan qoraal lagu sharixi Karin. Musqul ma lahaayn, biyo malahaayn, koronto ma lahaayn. Dadku waxaay wax ku karsanayeen gasacado ama koonbooyin sida dadka qaar u yaqanaan. Cajiib Safiir dhan oo safaarad noocaan oo kale dhinac kaga nool, dadkii uu masuulka ka ahaayna noloshaan kaga nool yihiin guriga uu ka haawl galo dhiniciisa kale. Xataa ma awoodi waayey in uu shoolad ama cooker aay wax ku karsadaan u gado?
Video-ga hoos ka fiirso Film documentry ah oo Safaarada Soomaaliya ee Dalka Talyaaniga uu ka sameeyey nin u dhashey dalkaasi Talyaaniga 2012.
Maadama banaanka looga saaray safaaradoodii haatan waxaay qaxoontigii soomaaliyeed seexdaan Darbiyada Roma iyagoo halkaas la ildaran yihiin cuduro, Gaajo, dhaxan iyo dhibaatooyin aan marnaba halkaan lagu soo koobi Karin. Awalba wax badan safaarada gudaheeyda kuma aaysan haaysan oo dhibaatooyin badan baa dadkaas haaystey balse maanta waxaa intaays u dheer meel aay xataa dhaxanta kaga gabadaan ma haaystaan.
Shacabka waxaan leeyahay Idin kaa ah dadkii lahaa dalkaan, hadii aad ka dhamaan waaydaan shaqsi taageer iyo Hebel baa dad ii xiga waxaad ogaataan Soomaaliyada dhan ee aad isku haaysataan in aan dib loo arki doonin, loona maqli doonin. Maanta meel kasta hooyo iyo ilma Soomaaliyeed baa ku ildaran. Kuwa qurbaha u soo qaxay waxba kuma noola oo waa kuwaas aad arkaysaan, kuwa dalka ku noolna waxba kuma noola. Ilaahay ma halaago umad aan iyagu is halaagin. Waxaan idin leeyahay intaa sacabka Nin danaayste ah u garaacaysaan hora mar gaari maaysaan ee Ilaahay dartiis isku raaca oo dal qurux badan baa Alle idin siiyee ku imaansada, shaqsiyaadka sharaftiina gadanayana ha u durbaan tumina ee meel uga soo wada jeedsada saas baad sharaf ku yeelanaysaane.
Waa Bilaahi Taawfiiq.
2 Jawaabood " Safaarada Soomaaliya ee Roma ma guri uu Nuur Cade leeyahaybaa, mise waa hanti qaran? (Daawo 2 Video) "
Talyaanigu Dadkuu ugu Darnaa ina Dilaayaaye.
Suntuu Duugay baa Deexdiyadi Diib ka soo karaye.
Wax ka Daran ninkaad Duubatee kuna Dillaalaaye.
??? kuwii ??? jiray Dunidi loo dhiibye.
Dad xunkii haddii loo Dayacay way kasii Dariye.
Nin Dalkuba Diinaar siisan baad Daaji tirahdeene.
Wiil quturtey says:
Asalama Caleykum bahda GEdo, aad baad ugu mahadsan tihiin macluumaadkaan aad noo soo gudbiseen runtii waa maclumaad aad xiiso u leh. Muna walaal aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay dhanbaalkaan qaaylo dhaanta ah oo aad dadka u soo ban dhigtay runtii waa arin iga oohisEY. WAA ARIN QIIRO LEH, ILAAHAY AJAR IYO XASANAAD HA KAA SIIYO, ANAGANA ILAHAAY HA NAGA DHIGO KUWA WANAAGA GARTA. NUUR CADE WAA NIN AAN XISHOONEEN SHUKRI SAID OO AH GABAR JOURNALIST AH DALKA TALYAANIGA AYAA ARINTAAN FASHISHAY BALSE NUUR CADE WUU QARIYEY. IYADANA WAXAAN LEENAHAY MAHADSANID, MUNANA WAXAAN LEENAHAY MAHADSANID. WELL DONE TO GABDHAHA SOOMAALIYEED EE WADANIYIINTA AH.